MOETHIHAAUNG: ဘန်ကောက်မြို့ ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြပွဲစတင်
ဘန်ကောက်မြို့ ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြပွဲစတင် (13/1/2014)
ထိုင်းအိမ်စောင့်အစိုးဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ယင့်လတ်ခ် ချင်န၀ပ် နှုတ်ထွက်ပြီး နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပဖို့ တောင်း ဆို ဆန္ဒနေသူတွေ ဘန်ကောက်မြို့ က အဓိက လမ်းဆုံ လမ်းခွ ၇ နေရာကို ပိတ်ဆို့ ပြီးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ တွင်းပိုင်းမှာ ဈေးဆိုင်အတော်များများပိတ်ထားကြပြီး လူအသွားအလာလည်းအတော်နည်းသွားလို့ ကားအသွားအလာက မရှိသလောက်ပါပဲ။
မြို့ တွင်းလမ်းမတွေ ဆန္ဒသူတွေ အစုအဖွဲ့ လိုက်သွားလာနေတာ တွေ့ ရပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့လမ်းပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြမယ့် နေရာ7နေရာကတော့ .......
1. ကျဲန့် ဝပ်ထနာ့ လမ်း၊ အစိုးရစုပေါင်းရုံး ၀င်ထွက်လမ်း
2. လတ်ဖရောင့်လမ်းစုံ၊ (ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ကနေ မြို့ တွင်းပိုင်းကိုလာတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့ ၀ိဖါးဝတီးလမ်း-ဖဟွန်ယိုးထင်၊ လတ်ဖရောင့် လမ်းစုံလမ်းခွဖြစ်ပါတယ်။ ကျတူကျတ်ဆန်းဒေးမားကဲတ်အနီး)
3. အနုစာဝရီးချိုင်းစမောရဖုန်း (သူရဲကောင်းကျောက်တိုင်) victory monument လမ်းစုံ
4. ပထုမ်းဝမ်း (မားဘွန်းခရောင်း (အမ်ဘီခေ) ကုန်တိုက် လမ်းစုံ - ကျူလာလောင်ကောင်းတက္ကသိုလ်အနီး)
5. လုမ်ဖိနီး (လုံမဏီပန်းခြံ-စီလုမ်းလမ်းထိပ် လမ်းစုံ)
6. ရတ်ခ်ျပစုံ (စယမ်ပါရကောန် ကုန်တိုက်၊ လေးမျက်နှာဘုရား၊ စဲန်တရယ်ဝေါလ်ကုန်တိုက် လမ်းစုံ)
7. အစို ခ် (စူခုမ်ဝစ်-အစိုခ်လမ်းစုံ)
ဆန္ဒပြသူတွေကိုဦးဆောင်နေတာက ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့ ဘူးသူ ဒီမိုကရက်ပါတီဒုတိ ယ ဥက္ကဌဟောင်း ဖြစ်တဲ့ စူထေ့ပ် ထူယတ်ခ်စူဘမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရေးတင်းမာမှု ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ်ယင့်လတ်ခ် ချင်န၀ပ်အစိုးရက ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဖျက်ပြီး အိမ်စောင့်အစိုးရအနေနဲ့2014 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2ရက်နေ့ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဖို့ ကြေညာထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့ အစိုးရဟာ လက်ရှိနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေကို တစ်နှစ်အတွင်း ဖြေရှင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အသစ်ပြန်လုပ်ရမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ်ကို ဆန္ဒပြသူတွေက လက်မခံပဲ ပယ်ချထားပါတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ2ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ရက်အကန့် အသတ်မရှိရွေ့ ဆိုင်းထားရမယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်ယင့်လတ်ခ် ချင်န၀ပ် အိမ်စောင့်အစိုးရကနေ လုံးဝနှုတ်ထွက်ရမယ်။ အများပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်ပြီး နိုင်ငံရေးပြဿနာကို အရင်ဖြေရှင်းရမယ်။ နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေဖြေရှင်းပြီမှ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရမယ်လို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေကို အရင်ဖြေရှင်းဖို့ ကို အဖိစစ် ဝေ့တ်ချားချီဝါ့ ဥက္ကဌအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့ အဓိကအတိုက်အခံပါတီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရက်ပါတီက လည်းတောင်းဆိုထားပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ2ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီမိုကရက်ပါတီက မ၀င်ပဲ သပိတ်မှောက်ထားတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေအရ ဖေဖေါ်ဝါရီလ2ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင် အစိုးရသစ်ပေါ်ထွက်လာဖို့ ကလည်း မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်။
မဲဆန္ဒနယ်မြေ 28 နေရာမှာ အရွေးခံမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမရှိ လို့ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ဘူး။ နောက်ထပ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ 22 နေရာမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးတည်း ၀င်အရွေးခံတဲ့အတွက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ 20 ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ ဆန္ဒမဲကိုရမှလွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အမတ် 500 ရှိပြီး လွှတ်တော်အမတ် 95 ရာခိုင်နှုန်းမရှိရင် ၀န်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ခန့် ခွင့်မရှိဘူး။ လက်ရှိအခြေအနေအရ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ လွှတ်တော်အမတ် 95 ရာခိုင်နှုန်းမရှိနိုင်ဘူးဖြစ်နေ တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကို နောက်ထပ်3လနောက်ဆုတ်ပြီးမေလ4ရက်နေ့ မှာပြုလုပ်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အိမ်စောင့်အစိုးရ၀န်ကြီးချုပ်ယင့်လတ်ခ် ချင်န၀ပ်ကို အကြောင်းကြားပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရက်ရွေ့ ဆိုင်းဖို့ ဥပဒေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ လက်ရှိဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ အတိအလင်းဖေါ်ပြထားတာက လွှတ်တော်ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် 45 ရက်ထက်မစော ရက်60 ထက်နောက်မကျပဲ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ က ရွေးကောက်ပွဲရက်ရွေ့ ဖို့ လုပ်ပိုင်မရှိဘူးလို့ ငြင်းနေပါတယ်။
လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုမှာထိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ကြားနေရပ် တည်နေတုန်း ဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေမဖြစ်အောင် အကာအကွယ်ပေး သွားမယ်၊ အာသိမ်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိ ဘူးလို့ ထိုင်းစစ်တပ်မှာသြဇာအရှိဆုံး ဖြစ်တဲ့ ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်ပရာ့ယွတ် ကျန်းအိုးချားက ပြောပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ ထဲကို တင့်ကားတွေ သယ်ယူလာတဲ့အတွက် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမလားဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမယ့် ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် အမှတ် 1 တိုင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့ စစ်ရေးပြအခန်းအနားအတွက် တင့်ကားတွေသယ်ယူလာတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်က ပြောပါတယ်။
လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလည်း ယင့်လတ်ခ် ချင်န၀ပ် အစိုးရကို ထောက်ခံသူတွေနဲ့ဆန့် ကျင်သူတွေအဖြစ် နှစ်ပိုင်းကွဲနေတယ်။
လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ဘယ်သူဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးတာကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖြစ်လာမှာကို အများက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်လာတဲ့2လကျော်ကာလအတွင်း သေဆုံးသူ 8 ဦးရှိပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူ 500 နီးပါရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။